Hlola iLiverpool, eNgilandi - World Tourism Portal
Hlola iLiverpool, eNgilandi
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeLiverpool
Bukela ividiyo ngeLiverpool
ILiverpool yidolobha nedolobha elikhulu laseNorth West England. Indawo yakhona yedolobha elikhulu kungokwesihlanu ngobukhulu e-UK.
Hlola iLiverpool engasempumalanga yeMersey Estuary, futhi ngokomlando ibilele ngaphakathi kwamakhulu asendulo eNtshonalanga Derby eningizimu nentshonalanga esifundeni laseLancashire. Kube yisikweletu ku-1207 nedolobha elise-1880. Ku-1889, yaba yisifunda sesifunda esizimele ngaphandle kweLancashire. Ukukhula kwayo njengechweba elikhulu kwafaniswa nokwanda kwedolobha kulo lonke uguquko lwezezimboni. Kanye nokuphatha izinto ezithwala izimpahla ezijwayelekile, izimpahla, izinto zokusetshenziswa okufana namalahle nekotini, abathengisi bedolobha babehileleka ekuhwebeni ngezigqila e-Atlantic. Ngekhulu le-19th, kwakuyisiteshi esikhulu sokusuka kwabokufika base-Ireland nabaseNgilandi beya eNyakatho Melika. ILiverpool yayiyitheku lokubhaliswa kwe-RMS yolwandle Titanic, i-RMS I-Lusitania, I-RMS ngoba iNdlovukazi uMary I kanye ne-RMS Olympic.
Ukuthandwa kwamaBeatles namanye amaqembu omculo kunomthelela kwisimo seLiverpool njengendawo yezivakashi. ILiverpool futhi iyikhaya lamaqembu amabili ebhola lePremier League, iLiverpool ne-Everton.
Umjaho wamahhashi weGrand National wenzeka minyaka yonke e-Aintree Racecourse emaphethelweni edolobha.
Idolobha ligubhe iminyaka yalo yeminyaka engu-800th e-2007. Ku-2008, yaqokwa njengeDolobha Lamasiko laseYurophu lonyaka. Izindawo eziningi zesikhungo sedolobha zinikezwe isikhundla se-World Heritage Site yi-UNESCO e2004. ILiverpool Maritime Mercantile City ifaka uPhilip Head, u-Albert Dock kanye noWilliam Brown Street. Isimo seLiverpool njengedolobha eliyitheku selidonsele inani labantu abahlukahlukene, okuyinto, ngokomlando, lalithathwa kubantu abahlukahlukene, amasiko nezinkolo, ikakhulukazi ezivela e-Ireland naseWales. Idolobha lelo futhi liyikhaya lomphakathi wakudala wabantu abamnyama ezweni kanye nomphakathi wakudala waseChina eYurophu.
ILiverpool ibiyisikhungo sokuqamba kabusha kwezimboni futhi kamuva. Ojantshi bezitimela, okokudlula emhlabeni, amathilamu kamasipala, izitimela zikagesi bonke baphayona eLiverpool njengezindlela zokuhamba ngobuningi. E-1829 nase-1836 imigudu yokuqala yesitimela emhlabeni yakhiwa ngaphansi kweLiverpool. Ukusuka ku-1950 kuya ku-1951, insizakalo yokuqala yezindiza enophephela emhlane yabagibeli phakathi kweLiverpool neCardiff.
Isikole sokuqala seZimpumputhe, iMechchanics 'Institute, iSikole esiphakeme samantombazane, indlu yomkhandlu kanye neNkantolo Yezingane konke kwasungulwa eLiverpool.
Emkhakheni wezempilo yomphakathi, isiteshi sokuqala sokuphulukisa izikebhe, ukugeza umphakathi nezindlu zokuwasha, isenzo sokuhlanzeka, isikhulu sezempilo yezempilo, umhlengikazi wesifunda, imvume yokuhamba ngezinyawo, i-ambulensi eyakhelwe inhloso, ukuxilongwa kwezokwelapha kwe-X-ray, isikole sezokwelapha ezishisa kakhulu injini yomlilo kamasipala, ubisi lwesikole samahhala nokudla kwesikole, isikhungo sokucwaninga ngomdlavuza, kanye nesikhungo sokucwaninga nge-zoonosis konke kwasungulwa eLiverpool. Umklomelo wokuqala waseBrithani Nobel wanikezwa i-1902 kuRonald Ross, uprofesa eSikoleni seTropical Medicine, isikole sokuqala sohlobo lwaso emhlabeni. Ukuhlinzwa kwamathambo kwaphayona eLiverpool kanye nama-anesthetics anamuhla ezokwelapha.
Uhlelo lokuqala lokuthuthwa komhlaba okuhlanganisiwe lwakhiwa eLiverpool.
Kwezezimali, iLiverpool yasungula inhlangano yokuqala yababhali base-UK kanye nesikhungo sokuqala sababhali bama akhawunti. Izinzuzo zokuqala zezimali zaseWestern world (ikusasa lekotoni) zathengiswa kwiLiverpool Cotton Exchange kuma-1700 aphela.
Kwezobuciko, iLiverpool yayiyikhaya lomtapo wolwazi wokuqala obolekayo, umphakathi we-athenaeum, isikhungo sezobuciko kanye nesikhungo sokulondolozwa kobuciko bomphakathi. ILiverpool futhi iyikhaya le-orchestra yasendulo yasendulo eyasinda e-UK, iRoyal Liverpool Philharmonic Orchestra, kanye nenkundla yemidlalo endala yasendulo, iLiverpool Playhouse.
E-1864, uPeter Ellis wakha isakhiwo sokuqala esakhiwe ngokhuni, esakhiwe ngamakhethini, u-Oriel Chambers, oyisibonelo sesiketi. Isitolo sokuqala esakhiwe saseMelika esakhiwe ngezinhloso sasiyiCompton House, esasigcwaliswe e1867. Kwakuyisitolo esikhulu kunazo zonke emhlabeni ngaleso sikhathi.
Phakathi kwe-1862 ne-1867, iLiverpool ibiphatha unyaka nonyaka Umkhosi Omkhulu Wama-Olimpiki. Le midlalo ibingeyokuqala ukuba abe amateur ngokuphelele emvelweni nakumazwe omhlaba ngokubukwa. Uhlelo lwe-Olmpiad yokuqala yanamuhla ku Athens kwi-1896 icishe ifane naleyo yamaOlimpiki eLiverpool. Ku-1865 Hulley wasungula iNational Olympian Association eLiverpool, owandulelayo weNhlangano Yama-Olimpiki waseBrithani. Izindatshana zayo zesisekelo zinikeze uhlaka lwe-International Olimpiki Charter.
Umnikazi wemikhumbi uSir Alfred Lewis Jones wethule ubhanana eGreat Britain e1884.
IMersey Railway, evulwe nge-1886, ifake umhubhe wokuqala emhlabeni ngaphansi kwesigcawu somfula kanye neziteshi zokuqala zomhlaba ezijulile ezingaphansi komhlaba.
E-1897, abafowethu baseLumière bahlunga iLiverpool, kubandakanya lokho okukholakala ukuthi kungowokuqala umkhondo wokulandela umkhondo emhlabeni, othathwe kuLiverpool Overhead Railway, ujantshi wokuqala ophakeme kagesi emhlabeni. I-Overhead Railway ibiyitimela yokuqala emhlabeni ukusebenzisa amayunithi kagesi amaningi, eyokuqala ukuqasha ukusayina okuzenzakalelayo, neyokuqala ukufaka i-escalator.
E-1999, iLiverpool bekungumuzi wokuqala ngaphandle kwenhloko-dolobha ukunikezwa amaphepha ama-Blue Heritage yi-English Heritage ngokubona "umnikelo obalulekile owenziwe ngamadodana namadodakazi akhe kuzo zonke izigaba zokuphila.
Iningi lezakhiwo ezisedolobheni zivela ngasekupheleni kwekhulu le-18th kuqhubeke, isikhathi lapho idolobha lakhula laba elinye lamandla aphambili eMbusweni waseBrithani. Kukhona ngaphezu kwezakhiwo ezisohlwini lwe-2,500 eLiverpool, zazo i-27 zona zikwibanga I nohlu kanti i-85 ibhalwe kuGrade II. Leli dolobha liphinde libe nesibalo esikhulu sezithombe zomphakathi kunanoma iyiphi enye indawo e-United Kingdom eceleni kwaseWestminster kanye nezindlu eziningi zaseGeorgia kunedolobha Bath. Lokhu kucebeleka kwezakhiwo kwakubonile ngemuva kwalokho iLiverpool ichazwa yiNgcebo YamaNgisi, njengomuzi waseVictoria ongcono kakhulu eNgilandi. Inani lokuklanywa nokuklanywa kweLiverpool kwaqashelwa e-2004, lapho izindawo eziningana kulo lonke idolobha kwathiwa zingama-UNESCO World Heritage Site. ILiverpool Maritime Mercantile City yanezelwa ukuqaphela iqhaza ledolobha ekwakheni ubuchwepheshe bamanye amazwe nobuchwepheshe beDokodo.
Njengesikhumulo esikhulu saseBrithani, amadokodo eLiverpool abekade eyimbangela yokuthuthukiswa kwedolobha. Kuvele izindimbane ezinkulu zokudonsela indawo yedolobha kuleli dolobha kubandakanya nokwakhiwa komkhumbi wamanzi wokuqala obiyelwe emhlabeni (i-Old Dock) e-1715 kanye nemijikelezo yokuqala yokuphakamisa u-hydraulic. Idokodo elaziwa kakhulu eLiverpool yiAlbert Dock, eyakhiwa nge1846 futhi namuhla iqukethe iqoqo elikhulu kunawo wonke ezakhiweni zeGrade I eziklelinye iBrithani. Wakhelwe ngaphansi kokuholwa UJesse Hartley, kubhekwe ukuthi kungenye yamawashi asethuthuke kakhulu noma kuphi emhlabeni lapho sekuqediwe futhi kuvame ukuhlotshaniswa nokusiza idolobha ukuba libe elinye lamachweba abaluleke kakhulu emhlabeni. Indawo yokudlela yase-Albert Dock, imigoqo, izitolo, amahhotela amabili kanye neMerseyside Maritime Museum, I-International Slavery Museum, iTate Liverpool kanye ne-The Beatles Indaba. Enyakatho enkabeni yedolobha iStanley Dock, ikhaya leStanley Dock Tobacco Warehouse, ngaleso sikhathi elakhiwa e1901, isakhiwo esikhulu kunazo zonke emhlabeni ngokwemvelo yendawo futhi namuhla simile njengesakhiwo esikhulu kunazo zonke emhlabeni esakhiwe ngezitini.
Enye yezindawo ezidume kakhulu eLiverpool yiPier Head, edume ngo-trio wezakhiwo - iRoyal Liverpool Building, iCunard Building nePort of Liverpool Building - ahlala phezu kwayo. Ngokubizwa ngokuthi yi- Izinhlanga ezintathu, lezi zakhiwo ziwubufakazi bokuthi ingcebo enkulu idolobha phakathi kwe-19th ngasekuqaleni kwekhulu le-20th.
Isikhundla esingokomlando seLiverpool njengenye yamachweba abaluleke kakhulu okuhweba emhlabeni kusho ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kwakhiwa izakhiwo eziningi ezinkulu edolobheni njengendlunkulu yokuhambisa izinkampani, izinkampani zemishwalense, amabhange namanye amafemu amakhulu. Umcebo omkhulu owalethwa, owabe uvunyelwa ukuthuthukiswa kwezakhiwo ezinkulu zomphakathi, eziklanyelwe ukuvumela abaphathi bendawo ukuthi 'baqhube idolobha ngokuziqhenya'.
Isifunda sezentengiselwano sigxile kuCastle Street, Dale Street nase-Old Hall Street izindawo zedolobha, futhi imigwaqo eminingi yaleyo ndawo isalandela imigudu yayo. ephakathi ukwakheka. Njengoba isisungule isikhathi esingaphezu kwamakhulu amathathu eminyaka le ndawo ibhekwa njengenye yezindawo ezibaluleke kakhulu zokwakha kuleli dolobha, njengoba kuqashelwa ngokufakwa kwayo eLiverpool Heritage World.
Isakhiwo esidala kunazo zonke endaweni Ibanga I kufakwe ohlwini lweLiverpool Town Hall, etholakala phezulu eCastle Street namadethi avela kwi1754. Lesi sakhiwo esivame ukubukwa njengendawo enhle kunazo zonke yezakhiwo zaseGeorgia, isakhiwo saziwa njengesinye sezakhiwo zomphakathi ezihlotshiswe kakhulu eBrithani. Futhi eStreet Street kukhona iBanga I elibhalwe iBank of England Building, eyakhiwa phakathi kwe1845 ne1848, njengenye yamagatsha amathathu ezifundazwe kuphela ebhange likazwelonke. Phakathi kwezinye izakhiwo kule ndawo kukhona iTakhiwo Sakhiwo, i-Albion House, Izakhiwo Zomasipala kanye ne-Oriel Chambers, ethathwa njengesinye sezakhiwo zokuqala zesitayela seSimanje esake sakhiwa.
Indawo ezungeze UWilliam Brown Street kuthiwa yi-'Cultural Quarter 'yedolobha, ngenxa yokuba khona kwezakhiwo eziningi zomphakathi. Le ndawo iphethwe ngokwakhiwa okuhlelwa ngokweqile, okuyiqembu elivelele kunazo zonke, i-St George's Hall libhekwa kabanzi njengesibonelo esihle kakhulu sokwakhiwa kwe-neo-classical Europe.
Ngenkathi iningi lezinsuku zokwakhiwa kweLiverpool lisuka maphakathi ne-18th century, kunezakhiwo eziningana ezibeka kuqala lesi sikhathi. Lesinye sakhiwo lesindze kakhulu lesisindzako yiSpeke Hall, iTudor indlu manor itholakala eningizimu yedolobha, eyaqedwa nge-1598. Lesi sakhiwo singesinye sezingodo ezimbalwa ezisele ezazakhiwe zakhiwa izindlu zakwaTudor ngasenyakatho kwe England futhi yaziwa ikakhulukazi ngengaphakathi layo lamaVictorian, elingezwe maphakathi ne-19th century. Isakhiwo esidala kakhulu phakathi enkabeni yedolobha yiBanga I ohlwini I-Bluecoat Chambers, eyakhiwa phakathi kwe-1717 ne-1718. Yakhelwe isitayela saseBrithani u-Anne ekuqaleni kwakuyikhaya lesikole iBluecoat School. Kusukela i-1908 isebenze njengesikhungo sobuciko eLiverpool.
ILiverpool yaziwa ngokuba namaCathedrals amabili, ngalinye elifaka isimo esizungezile. I-Anglican Cathedral, eyakhiwa phakathi kwe-1904 ne-1978, iyiCathedral enkulu kunazo zonke eBrithani kanye nelesihlanu ngobukhulu emhlabeni. Idizayinelwe futhi yakhiwe ngesitayela seGothic, ithathwa njengesinye sezakhiwo ezinkulu kakhulu ezakhiwe ngesikhathi se-20th ikhulu leminyaka. ISonto lamaRoma Katolika Metropolitan lakhiwa phakathi kwe-1962 ne-1967 futhi laziwa njengelinye lamaKhatholika okuqala ukuphula lo mklamo wendabuko wobudala.
Eminyakeni yamuva nje, izingxenye eziningi zesikhungo sedolobha laseLiverpool ziye zakhiwa kabusha futhi zakhiwa kabusha ngemuva kweminyaka yokuwohloka.
Kukhona ezinye izakhiwo eziningi eziphawuleka eLiverpool, kufaka phakathi ubuciko besakhiwo sangaphambi kwesikhumulo sezindiza iSpeke, i University of LiverpoolIVictoria Building, ne-Adelphi Hotel, eyayikade ithathwa njengelinye lamahhotela amahle kunawo wonke emhlabeni.
I-English Heritage National Rejista Yezomlando ichaza amapaki ama-Merseyside's Victorian Parks ngokuthi "okubaluleke kakhulu ezweni". Idolobha laseLiverpool linamapaki namathuna akleliswe kuhlu ayishumi, kufaka phakathi iBanga I nelesihlanu leBanga II, ngaphezu kwanoma iliphi elinye idolobha lesiNgisi ngaphandle London.
Njengakwamanye amadolobha amakhulu, iLiverpool yisikhungo esibalulekile samasiko ngaphakathi e-United Kingdom, okubandakanya umculo, ukwenza ubuciko, iminyuziyamu nemidwebo yobuciko, izincwadi kanye nobusuku phakathi kwabanye. E-2008, amagugu amasiko aleli dolobha agujwa kanye nedolobha eliphethe isihloko soMkhandlu Wamasiko waseYurophu, phakathi naleso sikhathi lapho kwagujwa khona imikhosi eminingi yamasiko edolobheni.
ILiverpool inobusuku obumnandi obuhlukahlukene futhi obuhlukahlukene, kanye nobusuku obuningi bendawo edonsa ebusuku, ama-pubs, ama-nightclub, izindawo zomculo bukhoma neziklabhu zamahlaya ezitholakala ezifundeni eziningi ezihlukile. I-2011 TripAdvisor ivotele iLiverpool ukuthi ibe nokuphila okuhle kakhulu kwanoma yiliphi idolobha lase-UK, ngaphambili Manchester, Leeds futhi ngisho London. IConsert Square, iSt Peter’s Square kanye ne-Seel ehlanganayo, iDuke kanye neHardman Street kuyikhaya kwezinye zezindawo ezinkulu kakhulu futhi ezaziwa kakhulu ngeLiverpool. Enye indawo edumile yokuhamba ebusuku enkabeni yedolobha nguMathew Street kanye neGay Quarter. I-Albert Dock ne-Lark Lane e-Aigburth nayo iqukethe inqwaba yemigoqo nezindawo ezisebusuku kakhulu.